Ijubethi eneendlebe kwihood
Ngamanye amaxesha ndifuna ukubuyela ebuntwaneni bam kunye nokungakhathaliseki kwakhe kunye novuyo olungenangqiqo. Uncedo kule nto unako ukugqoka. Ijikethi efana neendlebe iya kubangela ukumncoma kumntu odlulayo, kwaye inkosikazi iya kuzisa ulwandle olumnandi nolonwabo. Ingubo yebhinqa yabasebusika eneendlebe inokuba ngumbala oqaqambileyo, ukuchasisa ububomi bemihla ngemihla yemihla kunye nokuchaphazela iimvakalelo ezintle zabantu bonke. Kodwa unokukhetha iibheke zamabhinqa zasebusika ezineendlebe kunye nemibala emnyama. Oku kuya kukuvumela ukuba ugqoke nakwiyindoda eqinile, emphefumlweni womntwana. Mhlawumbi iindlebe kwijekethi emnyama kanye kwaye aziyi kubona. Kodwa kubabona, ngokuqinisekileyo, bamomotheka. Ijekethi eneendlebe ziqinisekisa isidima esihle. Kwaye, ngaphandle koko, lo mzekelo uyindlela yefashoni yonyaka, ngoko ukhawuleza ukuwuzalisa nge-wardrobe yakho yasebusika ukuze uhlale unomtsalane kwaye unomdla.
IiJebethi ezineendlebe - iimodeli ezinokwakheka
Eminye imibala eqaqambileyo, i-jacket eneendlebe eziqhelekileyo. Lo mbala ufaneleke kakhulu kumantombazana amancinci.
Ijacket eyaziwayo eneendlebe ngenxa yokuthatha inxaxheba kwiprojekthi ye-TV "Dom-2" uDasha Pynzar. Amantombazana afuna ukufana noDasha, bakhethe iimpahla ezifanayo njengaye.
Iindlebe kwiimbobo zihluke - ngamanye amaxesha zidibanisa i-unobtrusive, i-protruding. Kwaye kukho iibhaki, apho iindlebe zikhulu, njengoMickey Mouse. Oko akunakwenzeka ukuba ungaboni kwaye ungayibalaleli. Ukongeza kwipinki, eyona nto yayithandwayo yayiyijekethi ephuzi eneendlebe.
Ngoku ungakwazi ukudibanisa njengemizekelo emfutshane yeebhatyi eneendlebe, kunye nexesha elide, ezigubungelayo. I-hood ingaba nelinye i-fur edge, kodwa zikhona iigebengu kwaye zingenawo ubomvu. Kwimizekelo enjalo, iindlebe zidla ngokugqithiseleyo kwaye zibonwe ngcono.
Ukukhetha ibhatyi ngeendlebe, kuyafaneleka ukuthobela umgangatho wezinto eziphathekayo ezicetywayo ngendlela efanayo nangokukhetha enye iingubo. Ezona ziqhelekileyo ziphantsi kweebhatyi ngeendlebe - ezo mibala eqaqambileyo - obomvu, obomvu, obomvu, obuluhlaza, obomvu. I-hood yala makhonkxa ngokuqhelekileyo ihlotshiswe ngotya we-raccoon, ngamanye amaxesha ubomvu be-raccoon buqedile ukugqitywa kwee-slits zeepokotshi. Kukho iibhatyi ezigubungayo ngeendlebe ezinezitshixo. Ezi zingabizi, kodwa zingaphantsi kweebhatyi eziphantsi kwekhwalithi.
Kwijekethi eneendlebe uya kujonga umzobo kwaye ukhanyise, ubonise abantu malunga nesimo sakho sokonwaba kwaye unike isimo esihle.
Isibhatshane esifutshane - kunye nento enxibayo kunye nendlela yokudala imifanekiso emfashini?
Iingubo kunye nemibhalo
Isambatho esineenqwelombatho kwiimpahla zabasetyhini
Iingubo eziqhelekileyo zasehlobo
Iingqungquthela zasehlobo zaseFelk
Iingubo ezifudumeleyo ngabafazi abakhulelweyo
Izambatho zezimvu ezimfutshane zowesifazane
I-pajama ye-silk eneebhulukhwe
Ingubo yembatho kwi-mink
Ungakhetha njani ibhola yezemidlalo?
Ikhungwane kwi-sauce enomsila omuncu - iingcamango ezingavamile zokwenza isidlo esimnandi
Isihlalo sobukhosi sokuphumla
Isiprofeto esibi kakhulu seMatrona yaseMoscow ngo-2017!
Biography yeHalle Berry
Indlela yokwenza intlama yevarenki?
Inkukhu ye-Chicken neyinaninate
I-photoshoot engalinganiyo yenja ekhulelwe eyabetha i-intanethi
Ubuso be-Ultrasonic bubukeka
Iipilisi ezisuka kwi-sinusitis
Iingcali zeshishino zonxibelelwano
Imbewu yezinja ezinkulu
Hofitol xa ukhulelwa
I-Sunscreen - ulwazi olubalulekileyo ekukhetheni isisombululo esifanelekileyo
Indlela yokufumana ikiti kwijazi?
Izicathulo ezimnandi - iifoto ezingu-84 zezicathulo ezintle kakhulu kumantombazana
Iibhokiti ze-chocolate - iresiphi